Ungawubuka kuphi lo mdlalo ngesikhathi sonyaka ka-2021-2022? | Izindaba zegajethi
USepthemba ufana nokubuyela esimweni esijwayelekile, noma kwezemidlalo kakhulu. Imincintiswano yezemidlalo ivame ukuqala isizini yabo ehambisanayo noma iqhubeke nayo. Ngakho-ke ungalahlekelwa yilutho, kusuka ku- Izindaba zegajethi sizokutshela lapho ungabona khona imincintiswano emikhulu yezemidlalo ngesizini ka-2021/22.
Imvamisa uqala ukubuka ibhola emasontweni amabili okugcina ka-Agasti. Kube nokuhluka okukodwa kuphela okwenza usuku luhambe ekhalendeni futhi kwaba ngonyaka odlule nge-COVID. Le sizini isenezinsalela zobhubhane kepha ngezinga elincane. Ukuziphendukela kwemvelo okuhle kuzokwenza umphakathi ubuyele ezinkundleni zemidlalo, yize kunjalo, okwamanje, ngomthamo olinganiselwe.
Ngakho-ke uma ungomunye walabo abangatholi ukuthenga ithikithi, ungaqiniseka ngoba uzoqhubeka nokuba nenketho yokubuka iLaLiga kuthelevishini ngawo wonke la mazinga abasitshela ngawo Izintambo. Kulo nyaka isibalo sanyakenye siyaphindwa. IMovistar ne-Orange yizona zodwa opharetha ongabuka kuzo ibhola ngamaphakethe azo okuhlangana, amazinga we-Fusion no-Love, ngokulandelana.
Endabeni i-baloncestoKuzoncika ezingeni lomncintiswano. Uma kuyi- umncintiswano waseYurophu njenge-Euroleague, i-Basketball Champions League noma i-Eurocup, uyabona nge-DAZN; ngenkathi i-Endesa League, eMovistar, ngubani onamalungelo okusakaza ngalo mqhudelwano.
Kuthiwani ngeminye imidlalo?
Kwezimoto, imincintiswano yezindlovukazi yiFomula 1 neMotoGP. Yize lezi zingqwele zisalelwe yizinyanga ezimbalwa kuphela, usengasebenzisa ithuba lokushaywa kokugcina. Eqinisweni, uma uyigibela kahle, ungakwazi bona uhhafu wensalela yesizini ngokuphelele. Isizathu ukuthi i-DAZN yathatha amalungelo okusakaza kwaze kwaba ngu-2022 futhi inesikhathi samahhala senyanga eyodwa. Futhi, ngokuya ngalokho okuthandayo, unethuba lokubhalisela ipulatifomu njalo ngenyanga noma minyaka yonke.
Futhi, UMovistar wafinyelela esivumelwaneni neDAZN, ukuze ukwazi futhi ukubona okuqukethwe kwenjini ngokusebenzisa i-opharetha eluhlaza okwesibhakabhaka. Ifakiwe kwiphakeji ye-Motor TV, efakwe emananini ngamazinga amabili we-Fusion (Fusion Plus ne-Fusion Total Plus 4 lines). Kuwo wonke amanye amanani we-Fusion, kufanele ukhokhe izindleko zephakeji eziphakeme.
Ukuhamba ngebhayisikili njengamanje sekuqhubeka ngokugcwele ne-European Championship edolobheni lase-Italy iTrento. Ngakho-ke uma ungumthandi walo mdlalo, ungabuka yonke imijaho yamabhayisikili ngeDAZN. Ipulatifomu ineziteshi ezimbili ze-Eurosport (i-Eurosport 1 ne-Eurosport 2), enamalungelo okusakaza kuwo wonke amabhayisikili. Eqinisweni, i- Isiteshi i-Eurosport 1 siphakathi kwezinkampani ezifana ne-Orange, Vodafone noma iVirgin Telco.
Kukhona futhi kungenzeka bona ukuhamba ngebhayisikili nabasebenza njengo-Yoigo, Movistar, Guuk noma uMásMóvil. Kulokhu, nge-DAZN, efakwe kwamanye amanani ayo ngqo entengweni nakwamanye, kuzodingeka kukhokhwe izindleko eziphakeme.
Ngethenisi kuyefana nokuhamba ngebhayisikili. Vele, kuya ngomncintiswano uzoba nawo endaweni eyodwa noma kwenye. Amathathu amaGrand Slam amane (iRoland Garros, iUS Open neAustralia Open) abonakala kuEurosport 1, atholakala kuma-opharetha afana neYoigo, MásMóvil, Gukk, Movistar, Orange, Vodafone noma iVirgin Telco kanye neDAZN. Ngasohlangothini lwayo, iWimbledon eMovistar, okuyiyona ethenge amalungelo okulalelwayo. Kusukela emiqhudelwaneni ephansi efana neMaster 1000, 500 kanye ne-250, abesilisa babonakala eMovistar nabesifazane base-DAZN.
Ezemidlalo ziningi nezindlela zokuzibona nazo. Manje kufanele ukhethe umdlalo owuthanda kakhulu futhi uwuthokozele ngesizini ezayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Ungawubukela kuphi lo mdlalo kule sizini?